Ndị njem nlegharị anya na-enweghị agba agba nwere ike ịbanye Israel naanị n'ìgwè
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Israel Na -agbasa Akụkọ » Ndị njem nlegharị anya na-enweghị agba agba nwere ike ịbanye Israel naanị n'ìgwè
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Israel Na -agbasa Akụkọ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Resorts • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Ndị njem nlegharị anya na-enweghị agba agba nwere ike ịbanye Israel naanị n'ìgwè.
A na-ahụ ịmalitegharị ókèala Israel dị ka ihe dị mkpa iji weghachi ụlọ ọrụ njem nlegharị anya nke Israel, nke ọrịa COVID-19 mebiri na mmachi na-eso ya.
Ndị njem nlegharị anya mba ụwa na-enweghị ịgba ọgwụ mgbochi mkpali ga-enwe ike ịbanye Israel.
A ga-achọrọ ndị njem nlegharị anya na-enweghị ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19 nke atọ ka ha bụrụ akụkụ nke otu njegharị.
Nbanye ndị njem nlegharị anya mba ofesi ọhụrụ nke Israel na-amalite echi, Nọvemba 9, 2021.
Gọọmentị Israel kwupụtara taa na a ga-ahapụ ndị njem nlegharị anya si mba ofesi na-enweghị mgbagha megide COVID-19 ịbanye Israel, mana naanị dịka akụkụ nke ndị njem nlegharị anya ahaziri ahazi.
Ndị ọbịa si mba ọzọ na-enweghị ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa ga-enwe ike ịbanye Israel Ọ bụrụ na ihe karịrị ọnwa isii agafeela kemgbe ha nwetara ogbugba nke abụọ, ministri ahụike na njem nlegharị anya nke Israel kwuru na nkwupụta nkwonkwo.
Ndị ọbịa ahụ ga-anọ n'okpuru ọtụtụ ọnọdụ n'agbanyeghị, ministri kwuru.
Ndị na-ahụ maka njem nlegharị anya ga-enyerịrị ikike ka ndị otu nlegharị anya banye Israel, na ndị otu ya - mmadụ ise ruo 40 - kwesịrị isi na mba nwere ọnọdụ ọrịa na-efe efe dị mma ma were ọgwụ mgbochi ndị gọọmentị ghọtara. Òtù Ahụ Ike Ụwa (WHO).
Ihe ọhụrụ a chọrọ ga-adị irè malite echi.
Israel meghere ókè ya site na Nọvemba 1 nye ndị njem nlegharị anya n'otu n'otu ejiri ọgwụ mgbochi WHO ghọtara - nke Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinovac na Sinopharm nyere maka na ha agaghị njem na mba ndị akọwapụtara dị ka mpaghara "red" n'ime ụbọchị iri na anọ gara aga.
Malite na Nọvemba 15, ndị njem nlegharị anya, gbara ọgwụ mgbochi Sputnik V nke Russia, na-atụ anya na a ga-ahapụ ha ịbanye Israel. Ha ga-enwerịrị ule serology, nke na-achọpụta ọgwụ mgbochi.
N'ịnabata mkpebi ugbu a ikwe ka ndị otu njegharị banye na mba ahụ na-enweghị agba agba, Minista ahụike Nitzan Horowitz kwuru taa na "n'ihe gbasara njem nlegharị anya, anyị kwesịrị ịmụta ibi n'akụkụ coronavirus."
Mịnịsta na-ahụ maka njem nlegharị anya Yoel Razvozov kwuru, "Ụzọ ndị njem nleta na-alọta ka dị ogologo, yabụ anyị ga-eme ngwa ngwa na nke ọma ka ọnụ ọgụgụ ndị njem na-abịa Israel mụbaa."